XOG: Gianluigi Donnarumma oo laga yaabo inuu eryo wakiilka Mino Raiola – Gool FM
(Warsaw) 24 Juunyo 2017 – Gianluigi Donnarumma ayaa la sheegayaa inuu eryi karo wakiilkiisa Mino Raiola, maaddaama ay kala moowqif yihiin wakiilka iyo qoyska goolwalahan oo 2 aragtiyood kala haysta.
18-jirkan ayaa todobaadkii hore wuxuu diidey inuu saxiixo qandaraas qaali ah oo uu sanadkii ku qaadan lahaa €5m kaasoo ka dhigaya goolwalaha 3-aad ee dunida ugu mushaharka badan, waxaana diidmada loo aaneeyay wax uu Raiola ku sheegay ”hanjabaad. ”deg deg” iyo ”waabsi” sida uu yiri ka yimi maamulka Rossoneri.
Yeelkeede, maalmihii lasoo dhaafay waxay naadiga iyo macallin Vincenzo Montella – oo shakhsiyan booqday guriga qoyska Donnarumma oo deggan tuulada Castellammare di Stabia – ay wadeen dadaallo ay laacibka kusoo jiidanayaan.
Sida ku qoran Mediaset Premium, arrintani waxay kasii caraysiisay Raiola, kaasoo ina adeerkii Enzo (oo ka mid wakaaladdiisa) u diray Poland si uu maanta ula kulmo Donnarumma jeer ay Talyaanigu isu diyaarinayaan kulanka Germany ee European Under-21 Championship.
Waxaa lasoo weeinayaa in Enzo Raiola uu laacibka ugu tegey inuu u sheego inaan war cusub laga haynin Milan sidaa darteed uu ku biiro Real Madrid, iyadoo qoyska wiilku aysan rabin inuu wiilkoodu isagoo yar uu bartilmaameed u noqdo taagerayaal caraysan iyadoo Donnarumma laftiisa laga soo xigtey ”waxba ma samaynine maxay ii xasuuqayaan”?
Waxayna taasi keeni kartaa inay cayriyaan Raiola oo lagu sheego wakiil daniiste ah oo aan eegaynin maslaxada wiilkan yar oo weli ku jira waayihii koritaanka jireed iyo midka xirfadeed.
Raiola ayaa waxaa hadda ka hor iska eryey Marek Hamsik kaddib markii uu ku qalqaaliyay inuu ka tago Napoli oo uu hadda kabtan u yahay.